Waa Kuma ka isku Magaacaaba Gudoomiyaha UBO Eng Saalaxudiin Macoow? Part 2
Waa hagaag akhriste waa innoo markale iyo qaadaa dhiggii aan ku balansanayn ka hadalka kooxda sida aan anigu arkay ismoodsiiya in ay dadka iyo dalkeenna wareerinayaan balse xaqiiqda biya kama dhibcaanka ah ee aan salkeeda soo xadhay ay tahay in ay iyagu is wareerinayaan.
Intaanan u galin inaan idinka baandheeyo Saaluxudiin, aan mar kale u mahad celiyo asxaabta faraha badan ee qaarnna I soo weeeraray, qaarna soo taageeray xaqiiqda. 505 e-mail ayaa isoo gaadhay sidaan u maleeyay balse aan boqolkiiba halka ugu horeeya ka xuso. Akhriste bakhtiyaanasiib ayaan sameeyay oo shilin ayaan kor u tuuray hadba ruuxay ku dhacday ayaan caawa xusayaa. Intiinna kale barnaamij gooniya ayaan u samayn doonaa oo aan mid walba jawaabtiisa faaqidi doonaa.
1. waxaan u mahadcelinayaa Colenel Axmad Jire Qalinle CANADA oo u arka in aysan wakhtigan haboonayn in la yidhaa waan dagaalamaynaa ee ay xaq tahay in dalka horumarkiisa laga shaqeeyo.
2. Kooshin Shirwac (iimuu soo sheegin halkuu joogo) wuxuu yidhi, waxaan ku farxayaa in aan helo meel aan ka barto kooxda UBO hogamisa. "Ninkii tiisa daryeela ayaa tan ruuxa kalena ku dara.” “waan ogaaday haatan in aysan kooxdu waxba ahayn"walaal Xagar iyo bahda CakaaraNews barnaamijka miyaad sii wadaysaan oo UBO oo dhan baad na baraysaan mise waa idinka intaa?”
Saaxiibkay Kooshin mahadsanid waan wadaynaa illaa Gun iyo Baar.
3. Muna Maxamed "Ingriiska" waxay tidhi, "waxaan aad ula yaabanahay sida uu barnaamijkaagu u xiisa badan yahay ee aad hadana xiisaha ka qaadaysid kolka aad gabdhaha ku soo daraysid". walal gadhaha ha ku soodarin.
Walaal Munaay dad badan oo uu Colenel Axmed Jire Qalinle ugu horeeyay ayaa laftoodu gabdhaha ka hadalkooda ka soo cawday, balse maan garanin halkaad saluugteen. Waxaan ku kalsoonahay in ay midi idiin cadahay, oo ah in kolka ruux muuqda sooyaalkiisa taariikheed laga hadlaayo hadii ay gabadhi sooyaalkaas soo dhex gasho ay qasab tahay in la xusayo. Taasi micneheda looma qaadan karo in gabar wax loo dhimay.
4. Hani xuseen ;Sihaan: mahadsanid walaal.
5. Osmaan Abdilaahi Sool (wuxuu iila muuqday nin kasoo jeeda Somaliland). Wuxuu ka soo cawday in aan mar aan faaqidaayay Cabdi Sayid Macalin Yuusuf oo UBO Qurubka labaad ee Saalax u qaabilsan dibadda aan tusaale ugu soo qaatay Cabdi Malaw iyo SNM, wuxuuna iga soo codsaday in aanan Cabdi Sayid iyo wixii la mida la simin dadkooda wanaagsan.
Walaal Cusmaan Sooloow waan isku dayayaa, waxaanan ku leeyahay wax garadna waan ahay wilwiladana waan tumayaa kol haddii rag kale iigu oriyeen jaanta.
Waa hagaag, hadaba waa kan Saalaxudiin Macoow
Is Aragayagii Koobaad
Wuxuu ahaa Germany. waxaa la igu casuumay shir guud oo la igu yidhi kolkii hore wuxuu u dhexeeyaa dadka deegaanka. Madasha shirka iyo hoygayga waa masaafo qiyaastii 300KM.
Shirka waxaa fadhiyay Admiraal Maxamed Cumar Cismaan oo aan aad shaqsiyan isu naqaano, Cabdiraxmaan Maaday oo kolkaas aan aad aragtidiisa ugu farxay waayo Maaday xagayga taariikh aan xasuusto ayuu ii leeyahay waayo wuxuu ahaa hogaamiyihii iigu horeeyay ee kolkaan shaqada saxaafada ka bilaabay Radio muqdisho aan waraysto. Wuxuu kolkaas ahaa Gudoomiyahay ururkii Dhalinyarada Gobanimadoonka Soomaalida Galbeed loogu yeedhi jiray. Wuxuu waraysigaasi ku saabsanaa xog waran wafti uu hogaaminaayo uu tagay Ciraaq.
Waxaa kaloo shirka joogay oo si gaara la ii baray madaxii hore ee UBO Sheekh Ibraahim Cabdala. waxaana i baray Admiraal Ina Cumar Cismaan. Waxaa kaloo joogay ninka haatan ku xiga Admiralka o la yidhaa Maxamed Ismaaciil. oo aad garanaysid inuu geel jira fooqal geel jire yahay.
WAJIGAYAGII Labaad & Saalaxudiin Macoow
Wuxuu ii soo diray sanad ka bacdi teleefan wuxuu iga codsaday in aan dhaqso u imaado. Imaashahaygii ka dib wuxuu ii sheegay in jagada gudoomiyenimada UBO Germany la donaayo in laga maroorsado. Waxaa mu’aamarada maleegaayay koox si u suuxsan oo Cabdi Sayid hor bodaayo.
Waxaan waraystay ragii uu ka dacwoonaayay. waxay ii sheegeen in aanu Saalax ahayn OGAADEEN. Waxay daliil ka dhigteen magaciisa oo ah Saaluxudiin Xaaji "MACOOW". Waxay leeyihiin magacaas "MACOOW" maaha magac Ogaadeen. Waxay makhraati iigu keeneen nin la yidhaa Colaad oo ka soo jeeda Puntland oo ii qiraayay in uu yahay nin Ogaadeen isku dhex qarinaaya oo la yaqaan. Waxaan anigu ku dooday, hadii qadiyad guud laga hadlaayo Saalaxna qadiyadda guud u shaqaynaayo maqasabaa in uu Ogaadeen noqdo, dalkase ma Ogaadeen ayaa dhaxal u helay. Dhanka kale waxaa Saalax dab hoose ku shidaaya Cabdiraxmaan Maaday oo Saalaxna nasteex moodaayo. Waxaa la ii sheegay in baqdinta ugu weyn ee laga qabo Saalax ay tahay in uu afrikaankoo dhan jaajuuso oo u u jaajuuso wadamada Reer Galbeedka (maan garanin waxay ula Jeedeen). Waxay ii sheegeen in uu su’aalo badan waydiiyo dadka. Af Xabashiga waxaa lagu yidhaa ayuu ii sheegay Mr Maaday arinka uu kaga sasay (YA POLIIS DIYAAQEE) Taasoo micneheedu yahay “Su’aal booliis”.
Waxaanse Xagar ahaan Saalax ku aqaannaa in hadii aad sadex haben oo isku xigta aqalkiisa timaadid habeenka afraad uu cajalad kaa duubaayo, taasoo ay maqraati u ahayd in cajalado uu ka duubay si hoos ahaaneed rag ay aad isugu wanaagsanaayeen sida Cabdiraxmaan Maadeey iyo Generaal kale oo aan magaciisa liqsanahay oo ka mida hogaamiyayasha UBO qaybaha dalalkan uga qarafeeysta magaca halgameed.
Cajaladahaas oo baraha internedada lagu faafiyay, faafintaasoo uu Saalax masuul ka ahaa, iyadoo ay ragaasina kaga cawdeen saaxafada iyagoo sheegay in arinkuu Saalax kula kacay ayagoo aaminay ay tahay dhagar.
Saalax waxan ku aqaanaa maleegida qorshayaasha dad lagu minjo xaabiyo. Waxaan dareensanahay in Saalax siyaasadaba ka bilaabay waji qaldan oo uu u haysto siyaasadi in ay la mid tahay Boqnna Goynta Ruuxa.
Waxaa ka madhan ayaan is idhi in aysan siyaasadu saas ku micnaysnayn ee ay tahay qaab hogaamineed iyo u sahamin dal iyo dadkiisa meeshii doog leh.
Hal mar ayaan ogaaday in uu cajalad iga duubtay. Wuxuu ku falaayo ma garan umanaan baahanin in aan garto.
Wajiga kale Saalaxudiin Macoow
Waxaa Germany nagu soo booqday Dr Maxamed Siraad Doolaal oo dhowaan la dilay, dilkaasoo 100% loo haysto Admiral Maxamed Cumar CUSMAAN, Saaluxu Diin ayaa iga codsaday in aan si gaara u kaxaysanno, Tasoo micnaheedu yahay, maadaama Saalax aan Dalka Germany looga ogolayn in uu babuur kaxeeyo caafimaadkiisa oo aan taam ahayn darteed, in aan anigu baabuurkayga kula dhuunto Dr Maxamed Siraad Doolaal iyo Macoow. Waxaa laga dhuumanaaya waa canaasiir uu hor ordayo Cabdi Sayid sidii ayaan yeelay anaa labadaba casuumay, Saalax jaadka ma cuno, balse Doolaal ayaan ku casuumay, inkastoo aanan qudhaydu bahalkaas jaad rageeda hayn, habeenkas waxaan dareemay in dabin labada nin ii dhigaayeen.
Saalax ayaa iigu yaboohay i aan qaato jagada Gudoomiye ku xigeenka ONLF, waxay hadal ay kala boobeen Saalax iyo Doolaal igu yidhaadeen "Xagaroow dalkeenna barwaaqo ayaa ceegaagta, Doolal ahaan hay’ado Reer Galbeed ayaa lacago hoose noola diyaara, laalush weyn ayay ogol yihiin, hadii aan u fududaynno sidii ay ugula soo bixi lahaayeen. Adiga Xagar ahaan waa inaad qabiilkaaga Reer Jigjiga, Qabribayax iyo nawaaxigooda soo jiidataa. Waxaa kali ah oo danahaasi inoogu suurta galayaan in aan kala dhantaalo isku xidhnaanta dawlada dhexe iyo tan degaanka, islamarkaana aan kala irdhaysiinno dadka deegaanka iyo Dawlada Degaanka, hadii aan ku guulaysanno xoraynta dhulkana kaba sii fiican”.
Runtii habeenkaas aad ayaan u naxay, wuxuuna habeenkaasi ahaa habeenkii ii lahaa Go, aan qaadashadayda in aan aad uga fogaado Saalax, Doolaal Admiraalka, iyo dhamaan wixii ku abtirsada ONLF, waxaa ii baxay in dilka iyo dhaca dalka lagu hayo ujeedada laga leeyahay ay tahay meel aad u sokaysa oo aan sagaaraba ka biiqsanin iyo in dhulka Hindi baasaboora Ingriis haysata khayraadkiisa loo dhoco, iyo in lagu xidhmo koox maafiyada Talyaaniga ah.
Saalax wuuxuu ii sheegay in uu aad ugu xeel dheer yahay sida dadka dhulka u dhashay ee dibada jooga lacagaha lagu hawlgalaayo looga soo aruuriyo. Hawshaasna isaga lagu ogaado.
Waxay labada nin ii sharxeen meelaha khayraadka dabiiciga ah dalka laga helaayo iyo kooxaha guran doona, qaabka loogu fududaynaayo, iyo qaabka faa’iidada loo helaayo. Waxaa ii baxay in hadii aan habeenkaas HAYE idhaahdo, aan rag kula shuraakoobay iibinta dhiiga shacbiga, moodaya inaan nahay arxan u maqan, taasoo ah dhagar weyn oo aanu alleba igu dhaafayn.
Waxaa habeenkaas ii baxday in Saalax iyo Doolaal labaduba halganka ay ii sheegeen uu ka dhab yahay balse dhankaan mooday aanu ahayne loo halgamaayo Dano Gaar ah iyo Dilaalnimo, aan macne weyn samaynaynin, waxaa ii baxday in ay labaduba riyoonayaan.
Akhriste waa inoo mar kale, waxaana dhowaan idinku soo maqan oo aan si wacan idiinka baandhayn doonaa Admiraal Maxamed Cumar Cisman. Inkasta oo uu i soo waydiistay in cayaarta aan bilaabay aan isaga ka reebo, anna waxaan Admiraalka ugu jawaabay,
Hadaad Qili Ciyaarten
Cadda Lool Ka Qooqdeen
Waan Soosocdaa Qoolaab
Xagar Yare is a CakaaraNews Columnist and can be reached at xagar91@hotmail.com
Opinion articles written by individual contributors do not necessarily represent the opinion of CakaaraNews.com
Tacsi Allaha u Naxariistee Cabdulaahi Fidaar Siciid oo ku Geeriyooday Dalka Sweden
Sweden (CakaaraNews) War iminka naga soo gaadhay dalka Sweden ayaa sheegayaa in maanta oo Jimce ah uu dalka Sweden uu ku Geeriyooday Allaha u Naxariistee Cabdulaahi Fidaar Siciid.
Allaha u naxariistee Marxuum Cabdulaahi Fidaar wuxuu ka mid ahaa dadka aadka looga yaqaano jaaliyada shacabka Dawlad Degaanka Soomaalida ee dalalka Waqooyiga Yurub, khaasatan dalka Sweden oo miisaan culusna ku lahaa.
Shabakada CakaaraNews iyo dhamaan shaqaalaha CakaaraNews waxay tacsi u dirayaan dhamaan eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Allaha u Naxariistee Cabdulaahi Fidaar Siciid meel kasta oo ay ka joogaan dunida dacaladeeda, khaasatan qaraabada magacyadoodu hoos ku taxan yihiin.
Waxaanan Illaahay uga baryaynaa inuu jannadii fardowsa ka waraabiyo. Ehelkii iyo qaraabadii uu ka tagayna samir iyo iimaan Allaha ka siiyo. Aamiin.. Aamiin.. Aamiin..
Waxaa tacsidan na soo gaadhsiiyay Mudane Cabdi Fataax Dhaga-Caleen, London UK
Sidoo kale, waxaan tacsidan gaadhsiinaynaa dadka kala ah:-
Cadulqaadir Maxamuud Xarbi
Cabdirahman Said Aw Hassan
Axmed Ibrahim Abdi
Cabdillaahi Farah Abdi
Axmed Cabdillahi Cilmi
Ismail Ibrahim Gulaid
Cumer Cabdulqadir Saleh
Maxamed Cabdillahi Fidaar
Amran Cabdillahi Fidaar
Anisa Cabdillahi Fidaar
Khalid Omer Cabdulqadir
Cabdiraxman Mohamoud Cabdulqadir
Cali Looyar Samaale
Maxamed caaqil Yare
Axmed Yusuf Kiijiye
Waliid Omer Cabdulqaadir
Khadra Omer Cabdulqadir
Hibo Omer Cabdulqaadir
Cabdi Good Faruur
Yacquub Jibril Cabdi
Ibraahim Axmed Awad
Mustafa Jamaac Muse
Badri Muse Jama
Colaad Ibrahim Jeedalyare
Khadar Maxamed Muse
Nimco Maxamed Muse
Maxamed Axmed Aw xassan
Hibaad Axmed Aw Hassan
Xaliimo Cabdillahi Gondar
Naado Cabdillahi Gondor
Khadra Cabdillahi Gondarr
Mustafa Ahmed Muxumed
Deeqa Ahmed Muxumed
Cabdifataax M.A. Fidaar
Cabdiraxmaan Cabdillaahi Fidaar
Hibo Cabdillahi Fidaar
Cabdirazaq Cabdillahi Fidaar
Cabdulcasis Cabdillahi Fidaar
Naciima Aadan M. Fidaar
Nuura Aadan M. Fidaar
Cabdi Maxamed Fidaar
Nur Maxamed Fidaar
Cali Maxamed Muxumed
Waa Kuma ka isku Magaacaaba Gudoomiyaha UBO Eng Saalaxudiin Macoow?
“Allahayoow wixii aan illoobaba
Nin Xumi Saw Ima Ogaysiiyo”
Waa innagii ku balansanayn in aan bal is tusno xubnaha yidhi dal iyo dad ayaan u dadaalaynaa. Ujeedada aan arinkaas uga gol leeyahayna, waa in aan dadkayga ku qanciyo xaqiiqada biyo kama dhibcaanka ah.
Waxaynu horay u soo barannay Wasiirka Arimaha Dibadda ee garabka Macoow ninka la yidhaa Cabdi Sayid oo aan isla garrannay in uu yahay meel madhan.
Bal maantana aan casharkeenna ku barranno ninka Cabdi Sayid u gudoomiya. Waa ninka la yidhaa Eng Cabdiraxmaan Saalaxudiin Xaaji Macoow oo hadda sheegta in uu yahay hogaamiyaha sharciga ah ee kursiga UBO kana wareejiyay Admiral Guuto Inna Cumar Cismaan, taasoo uu Admiral diidan yahay.
Balse inta aanan u guda-galin casharka waxaan halkan uga mahad-celinayaa akhristayaashii daalacday falanqayntii aan ku soo sameeyay raggii hore. Kuwaas oo i siiyay feedback aad wax ku ool ah. Waxaan ka tiriyay 471 qof oo email igula soo xidhiidhay. Dadkaas ila soo xidhiidhay, 51 qof way i soo weerareen oo waliba dil iigu soo goodiyeen. Halka 420 ruuxna ay dhiiri-galin iyo tirtirsi aan ka heley.
Balse dhaliil iyo amaan labadaba shaqada saxaafadda ayay ku ladhan yihiin oo ay ehel wadaagaan. Suxufigana waxaa ka reeban in uu si caadifadi ku jirto ugu jawaabo akhristihiisa, dhagaystihiisa, ama daawadihiisa.
Ka rogoo laba saar
Saaluxudiin waa nin gaaban, yarehe buuran, calool weyn oo badhi (bari) gaaban. Wuxuu xidhaa muraayadaha indhaha. Xagga muuqaalka, maaha Atoore ay gabdhuhu indhaha la sii raacayaan. Xero ka baxse ma aha, muraayada qalbiga gabdhaha aad u jabinaaya.
Ma aha nin sida Cabdi Sayid Macalin Yuusuf, isagu is faaniya, oo meesha kolka aad Cabdi Sayid oo ah Kiisa Arimaha Dibadda 8 saacadood wada fadhidaan, 7 saacadood isagu is ammaanaya, wuxuu Saalax jecel yahay in aad adigu 7 saacadood isaga amaantid.
Waxaan tijaabiyay in haddii aad Saaluxudiin tidhaahdid waxaad u egtahay Ilaahay in uu aad u farxayo si wanaagsanna kuu soo dhoweesanaayo, meeshii uu ruuxa qumani inta kor u boodo ku odhan lahaa “Walaa Xawla Wallaa Quwat Illaa Billah Caliyul Cathiim!!! War ma Rabiga Carshul Cadiimka ayaad igu shabihi?”.
Saalax waxaa uu Jarmalka degen yahay qiyaastii 30-35. cimrigiisa waxaan ku qiyaasay 55-65. Wuxuu haystaa dhalashada Jarmalka. waanu is naqaanaa, balse inkastoo aanan waydiinin waxaa si hoose la iigu sheegay in uu haysto diinta masiixiga ah. Aqalkiisa oo aan dhowr jeer ku booqday maalin ayaan ku arkay kitaabka injiilka (Bible).
Haysashada Bibleka daliil weyn iigama dhigayso inuu Masiixi (Christian) yahay, balse aaminaada qofka isaga ayay u private (khaas) tahay. Xaq ayuuna ruuxa aadamaha ahi u leeyahay waxa uu rabo in uu is aamin siiyo. Laakiinse, waxaa inna khusaysa ayaan filayaa inaan is waydiino “Saaluxudiin ma yahay ruux danta guud ehel u ah?”
Saalax maalin ayuu gurigiisa oo ku yaal magaalada Karlsruhe, Germany igu marti qaaday. Waxaa uu iiga dacwoonaayay isla markaana iga codsanaayay in aan la dilo Cabdi Sayid Macalin Yuusuf iyo xulufo uu wato oo sida uu ii sheegay doonaya in ay afka dhulka ugu dhuftaan. Maalintaas hadii aanu 7 saacadood wada hadlaynnay ayaa waxaa noo soo galay salaadii Maqrib.
Waxaan ugu yaboohay in aan bal sheekada hakino si aan maqribka u tukanno. Wuxuu ii sheegay in uu soo waysaysanayo. Salaaddi ayaanu galnay kolka aan rukuucay ayaa waxaa ay indhaygu qabteen Saalaxudiin oo aan lugaha soo maydhanin (subxaanalaah), xusuladiisuna engegen yihiin.
Kolkii danbe waxaan ogaaday in uu si is tus ah uun wajiga qayb yar oo ka mida ninku soo yarehe qooyay, wax base kama aan ogaysiinin. Malaha, waxaaba aniga khayr iigu jiray in aan u sheego aayada odhanaysa “Ilaah wuu neceb yahay kuwa sida is tuska ah u tukada”.
Saaluxudiin inta aan ogahay wuxuu guursaday tiraba afar goor, gabadh Jarmal ah iyo sadex Soomaali ah. Laba ka mida oo Afrika looga keenay midna isma ay qabin wax sanad ka badan oo way ka carareen. Wuxuuna ii sheegay in ay khayaameen oo ay kolkii horebe u guursadeen si ay dalkan uun u soo galaan, taasoo kolkaan baadhay uu run ku sheegay oo si khaa’inimo ah loogga faa’iidaystay.
Maalin ayaan kula kaftamay “Saalaxoow rag intaan bartay adaa ugu khaa’insanaaye, ma naago ayaa kaa seed caleeyay oo khaa’inimadaadii xusulo dheeraaday?”
Isagoo arinkaas aad uga naxay ayuu anigu waan kaftamayaye si dhaba isagoo indhaha mirig ka siinaya iigu jawaabay, “Xagaroow naagahan yar yar waxaa lugta ii qabtay rag masuuliyiin ah oo Ogaadeen ah. Iyagaana mu’aamiradda dabinkeeda ii maleegay”!!!
Gabdhahaas waxaa ka mid ahayd gabadh ka soo jeeda Jeneraalkii Booliska Jamhuuriyadii Soomaaliyeed xukumi Jiray Alle haw naxariistee General Aadan Kuukaay.
Gabadhaas waxaa uu ka keenay Kenya. Dhowr bilood kolkuu qabay ayay ka carartay. Wuxuu damcay in uu dib ugu celiyo Kenya. Waxaa gabadhii la dhuuntay UBOda garabka Admiral Inna Cumar Cismaan, taasoo aan u aanaynaayo in isku dhaca Admiraalka iyo Saalax aysanba ku salaysnayn qadiyad iyo fikir dan guud oo laysku af garan waayaye, nalse inay ahayd uun gabadhaas uu soo dhoofsaday iyo rag isaga ka sii dhoofsaday, oo yartii dhan kale ula dhoofay!!!!!
Waxaa, gabadhaas darteed, isku ruux baxay asaga iyo rag badan oo uu hogaaminaayo ninka maanta Jarmalka UBO Admiralka uga wakiilka ah oo la yidhaahdo Raabi Dheere. Aakhirkiina Saalax ayaa afka dhulka loo daray oo la yidhi “siddi, sidigtaada mooyee, Saalax dhul u dhacaaga hubso”.
Saaluxudiin mawqifkiisa siyaasadeed dabeecadihiisa iyo jabkii ay garabka admiralka isla soo mareen, waa innoo qaybta labaad iyo todobaadka danbe.
Budhcadda UBO oo si Cad uga Muuqda Argagixisada Laga Wado Geeska Afrika
Ururka budhcadda ee UBO oo si cad uga dhex muuqda kaalinta ay kaga jiraan dhaqdhaqaayada argagaxisnimo ee caalamiga ah iyo hawlgalada ay ka fuliyaan shucuubta waddamada ku dhaqan mandaqada Geeska Afrika guud ahaan, gaar ahaan waddamada Ethiopia iyo Soomaliya sida gobolada ismaamulka Dowlad Degaanka Soomaalida Ethiopia iyo deegaanada ismaamulada ka jira waddanka Soomaaliya ee Puntaland iyo Somaliland ee nabaddu ka jirto.
Waxaannu ognahay ka dib markii ay Maamulka dastuuriga dimuqraadiga ah ee DDS ka jira waddanka Ethiopia oo taakula ka helaya shacabkiisa nabadoonka ah ay ka adkaadeen ururkan budhcadka ah ee UBO sida ku cad natiijooyinkii ka soo baxay dhacdooyinkii ay ku talaabsadeen ee maamulka suuban ee ka jira DDS tan iyo 12kii bilood ee ugu danbeeyey. Waxay Ciidamada mawaadhiniinta ah ee la magac baxay Liyuu Booliska ay si isdaba joog ah u soo af jareen dhaqdhaqaaqyadii argagixisnimo ee ka jiray gobolo ka mid ah Ismaamulka DDS.
Waa wax marag madoonta ah inay xitaa qudha ka jareen xubno sarsare oo ka tirsanaa budhcadda UBO, qaar badanna ay iyaga oo nool gacanta ku dhigeen, haba ugu danbeeyaan qabashada xubnahii Gollaha Dhexe ee nabad-diidka UBO ku jiray ee la sheegay in gacanta lagu dhigay 22 bishii Oktoober ee sanadkan 2009. Waxaase ugu daran oo wax laga xishooda ah in ururadaa argagixisada ay iskaashi buuxa la leeyihiin ururada argagixisada ah ka hawlgala Geeska Afrika sida AL-Shabaab, Xisbul-Islaam, OLF, Qinijid, AL-Qa’ida etc.
Maxaa caddayn ah oo loo hayaa weeye su’aasha taagan?
1. Waxaan wada ognahay oo aan qarsoonayn in UBO ka qayb qaadatay qaybsigii hubkii laga boobay dowladda tabarta daran ee ku meel gaarka Soomaaliyeed (TFG) ee uu ku caawiyay Maraykanka.
Fadeexad weyn ayaa ka taagan hubkii Maraykanku siiyey DKMG ah, fadeexadu waa mid dhinacyo badan taabanaysa mid kastana tan kale ay ka daran tahay, ugu yaraan waa tusaale kale oo muujinaya sida Maraykanka uusan marnaba uga fiirsanin talaabooyinka uu u qaado dhanka Soomaaliya.
2. Waxaan la wada ogsoonyahay oo aan cidina dafiri karin sida ku cad muuqaaladii laga soo duubay inay ku jireen lix (6) xubnood ka tirsan ururka ka soo jeeda Qowmiyadda Oromiya ee kula shiraakooway hawlaha argagixidnimada ay ka wadaan mandaqadda Geeska Afrika. Kuwaas oo laga hoggaaminyo waddanka kali taliska regiimka ee Ereteria.
Dagaaladii ciidamada is xilqaamay ee ka soo dhex baxay bulshada nabadoonka ah ku dhaqan Ismaamulka DDS ee la magac baxay Liyuu Boolis ay ku baabi’yeen xubno ka tirsan UBO iyo kuway miciinka mooyeen oo isku dayday in ay argagixiyaan dadka ku dhaqan gobolka Dhagaxbuur tuulooyin ka tirsan laba todobaad. Waana marag madoonto.
3. Waxaase waxaa oo idil ka daran ka qayb qaadashada UBO ay ka qayb qaadanayso dagaalada ka dhaxeeya kooxaha xag jirka ah ee ku qadhaabta magaca Islaamic Jahaadistis ka socda gobolada koonfureed ee Jubooyinka Soomaaliya- waa Al-Shabaab iyo Al-Xisbullaah.
Waa yaabe, UBO markii ay ku hungooday damaceedii ahaa in ay ku carqaladeyso jiritaanka Ismaamulka xukuumadda DDS ayay u jahaydsatay inay qayb ka gasho boobka, laynta burburinta dadka masaakiinta ah ee dawlad la’aanta ah ee ku dhaqan gobolada koonfureed ee Jubbooyinka Soomaaliya. Waa yaabe, imisa shaadh bay leeyihiin UBO oo ay ku shaqeeyaan? Mar waa Al-Shabaab Marna waa Xiisbullaah, Marna waa niman Oromo ah, Marna ma SPM?
Waxaa cad oo marag ma doonta ah inaysan dhamaan midna ahayn oo ay yihiin calooshood u shaqaystayaal budhcad ah oo weliba waxaa soo ifafaala baxay inuu hogaamiyahaha kooxdadan ka tirsan budhcadda caalamiga ee ka hawl gasha Geeska Afrika budhcad ina Cismaan oo xubin buuxda ka yahay ururka dhexe ee boardka budhcad badeedka ka hawlgala badweynta Indian Ocean and Red-Sea.
Haddaba waxaan ugu baaqaynaa dhamaan xubnaha ka soo jeeda umadda ku dhaqan DDS ee beenta loo sheegay kuna abtirsada beelaha magacooda la bah dilaya in ay ka soo waantoobaan falalkaa lagu gumaadaya dadkooda iyo jiritaanka dalkooda kuna soo biiraan hawlaha horumarinta ee ka socda qoodigooda oo ay horseedka ka yihiin wiilasha walaalahood ah ee maamula xukuumadda Ismaamulka DDS.
Qarnigan 22aad ee ay dunida casriga marayso gabdhaheenna iyo wiilasheena waxay u baahan yihiin inay helaan nolol nabdoon, waxbarasho, caafimaad iyo horumar ay ku talaabsadaan oo ay kuna naaloodaan kheyraadka ku dahsoon ciidooda qaaliga ah iyaga xor ah sida ku cad dastuurka ay la waddaagaan qowmiyadaha ku bahoobay dowladda dhexe ee Itoobiya.
Ilaah mahaddii maanta cid ka carqaladeyn kartaa ma jirto xornimada iyo neecawda udgoon ay ku jiraan.
War hooy UBOW waligaaba shaadh cusub soo qaado oo la imow tuug magaca Oromo wadata, meelahaada ka qadhaabso ha ku soo hongoobin hashan ku dul babanayso calanka astaanta u ah DDS raggii lahaa baa taladeeda leh oo weliba maydkaada ayay ku dul dhaanteynayaan oo waad aragtaa, kuna dul dhaantayn doona weligeed!!!!!
Abdi Osman (Abdi Mulla)
Maqaalkani wuxuu ka turjumayaa aragtida Qoraaga loomana fasiran karo tan CakaaraNews.com
Laba Qaawan Isma Qaado! Xaalka UBO Iyo Afwerki
Waxay noqotay sheeko la yaab leh oo ay dadka dunida gaar ahaan kuwa ku nool wadamada Geeska Africa ay dhafoorada ka qabsadaan. Sheekada la yaabka leh waa siyaasada darbi jiidhka ah ee uu ku dhaqmo arxanlaawaha ku amar ku taagleeya masuuliyada Eritrea. Waxa ay u gashay baalkeeda taariikhda xasarada ay ku caan baxdey xukuumada Asmara. Waxa ay geeska la soo gashay wadankeena xili aan sii fogayn. Waxana cawaaqib xumadii ay kala kulantay hawlgalkaas uu sabab u yahay ilaa maanta miyir doorsoonka maskaxeed ee haysta Isaias Afewerki.
Waxaana xaalku uu mar kale noqdey ka daroo dibi dhal. Waxay isku maqiiqdey mar kale wadamada la dariska ah sida Jabuuti, Yeman iyo Sudan. Waxay la’ ahayd Afewerki xeelad uu kaga fakan karo mawjadaha siyaasadeed , dhaqaaale ee ka jira dalkiisa. Siduu rabay marna noqon wayday. Wuxuu maanta qayb wayn ka yahay colaadaha ka jira dhulka ay Soomaalidu degto sida dalka Soomaaliya iyo degaankeena oo ay uga dhaqdhaqaaqaan UBO iyo kuwa diinta ku dawarsada UWSLF/Al-itixaad Jirjiroole.
Wuxuu ku jiraa miyir doorsoon aan dawo lahayn. Waxa ay ku jiraan shacabkiisu nolol aad u qalafsan. Waa la xasuuqaa, diimahooda xor uma aha, dhagahoodu marnaba maqli maayaan aragtiyo mucaaradeed sharciyaysan oo codkooda si toosa u soo bandhiga, sida lagu yaqaan asxaabta mucaaridka reer Ethiopia ee sida hufan u soo bandhiga waxa ay biyo diidsan yihiin. Wadanku waa iska sidii xabsi oo kale.
Dadka Reer Eritrea marnaba raali kama ahaadeen in wadankooda laga abaabulo kooxo argagixiso ah dhaqaalahoodana la galiyo. Dareenkooda siyaasadeed aad ayuu u kacsan yahay. Waxa ay u baqoolaan wadamada dariska ah iyaga oo raadinaya nolol wanaagsan iyo amni muwaadiniinta wadankaasi udhashay. Warbaahinta waxa loo adeegsadaa dhinaca fidinta propagandada. Uma kuurgasho warbaahinta reer Eritrea xaaladaha adag ee bulshada. Warbaahinta madaxa banaan ee dunida gaar ahaan kuwa wadamada carabta oo inta badan ruqsado galitaan wadankaas ka hela ma soo gudbiyaan wax aan ka ahayn dacaayado raqiis ah oo ay ka soo dhaansadaan ceelka Afwerki.
Waxyaabaha qaadan waaga ku noqda dadka reer Eritrea iyo dadka kale ee dunida ee qaba aragtida fayaw waa dacaayadaha uu curinteeda leeyahay Afwerki, sida wax uu ku sheego dawlada dadka tirada yar ay hogaamiyaan ee Ethiopia. Wuxuu ilawsanyahay ileen waa kaligii taliyee in ay cadaalada iyo dimuqraadiyada ay qayb ka tahay in hogaanka sare ee dal laga dhex arki karo dad laga tiro badan yahay.
Waxaana aad loola yaabaa aragtida jirjiroolayaasha islaamiyiinta sheegta ee reer soomaaliya ay cod dheer ugu dhawaaqi jireen Dawlada Tigreega tirada yar. Way isaga hadaaqayaan iyaga oo aan u meel dayeen kana fiirsanayn. Waxay muujinaysaa jahliga kaga jira diinta ay sheegtaan oo sal u ah cadaalad, sinaan, wada noolaansho iyo nabad gelyo. Kuwan sheegta islaamiyiinta iyo UBO, waxa ay si wada jir ah ugu luuqeeyaan dacaayado iyo hal ku dhegyo uu abwaankeedu yahay odeyga miyir doorsoonka ku jira. Waa mid aan caqligu qaadanayn in koox yar oo faro ku tiris ah ay qadiyad umadeed ay la hoostagaan nin waalan oo tiisii la wareersan.
Waa mid aan shaki lahayn in maalin xun UBO lagu gardaadiyay odey Afwerki si ay kolba gidaar ujiidho,UBO waxay xasaradeedii utalawdey dhinaca gobolada nabdoon ee puntland, waxa ka hor yimid darbi adag oo ayna jiidhi Karin, reer puntland horay uga tashadeen inay gacan bir ah kaga hortagaan dhaqdhaqaaqyada amaan daro ku keenaya gudaha gobolada puntland iyo xuduuda ay la wadaagto dalalka dariska la ah, UBO xaalkeedu wuxuu noqdey LABA QAAWAN ISMA QAADO!!
Iyadii oo siyaasad ahaan iyo budhdcad ahaan u burburtay xaalkeeduna noqday mid lagu maadsado, waxay is tidhi cod dheer ku awr kacso adoo ku dhawaaqaya Alla Yaa Absama ah ? Haye, kuwaas ayaa laga sugi inay dad iyo dal xoreeyaan? Waa hadiiba dal maqanyahay ? Waxay soo dhawaysay arintaasi in UBO u god gasho Halka dhinaca kale ciladaha iyo qaska ka jira geeska Africa loo aqoonsadey colaad ay hurinayso Eritrea, waxa ay Ethiopia sida beesha caalamka ay taageero la daba taagan tahay Dawlada Dhexe ee Somalia, Hadaba yaan UBO ahayn oo qudcur madaw socdey?
Caqligeena aan ku garano in UBO ay UBO tahay , UBOna ay tahay Ururka Bahdilka Ogaadeenka Lama huraana ay tahay in la garab istaago lana hambalyeeyo wiilasha Liyuu Police, Xooga aan cabsan ma gabadayaasha, u taagan tirtirida iyo dabargoynta xanuunsidayaasha UBO ee dal iyo dibad bukaanka ku ah ! inagga oo taageero iyo is gargaarsi ladaba taagan walaalaheena reer Puntland ee kaalinta wanaagsan kaga jira ololaha la dagaalanka hargab-nabad-diidka UBO….
Hadal iyo dhamaantiis waa inagu danbi oo waa la inoo qabsan xag ilaahay hadii aan Alle dartiis udabo socono gacan ku dhiiglayaasha dad qalatada ah ee kala duwan UBO/MJXSG/itixaad Jirjiroole, Dhiiga Aadamaha oo la daadiyo, maalkooda oo la dhaco, dhulka oo lagubo, Aadamaha oo la argagax galiyo intuba waa duruusta ay soo qaateen kuwa u xamaasadaysan jidka Alle, waxa ay rabaan inaan carab cabiidiin u ahaano "Slaves" qarnigan 21aad.
Waxay doonayaan inay inoogu soo gabadaan diinteena sharfoon. Waxa ay ku dawarsi tagtaa UWSLF/itixaad Jirjiroole xoraynta muslimiinta Soomaali Galbeed, waxan aad ula yaabaa in raga hogaamiya ururkan lagu qarafaysto ay caruurtoodu ku jiraan liiska agoonta hay'adaha carbeed wax siiyaan! nin lagu yidhi soo diwaan gali agoonta iyo haweenka ragoodu dhinteen oo kawaran akhristow galin horeba horay ka geeyay liiskii magacda xaaskiisa iyo caruurtiisa!!! KHAA'INUL SADAQA iga dheh!!
Hadaba yaan dheg jalaq loo siin wadaad xumaha baneeyay jihaad la inagu soo qaado inaga oo Ashahaadada qirayna, yaa inaga masjid iyo salaad badan? Khayrka jid walba looga dhawaaqayaa dhulkeena, diinteenu way socon caalamka oo run buu sheegay Nabi Muxamed Markii uu yidhi waxay gaadhi meesha ay habeenka iyo maalintuba gaadhaan. Waa runtaa nabi Alloow oo waa diintii aad nooga tagtay oo way gaadhay meel walba iyada oo aan seef ku socon.
Waxay diinteenu jeexday caalamka qaarad walba oo ay si nabada ku gaadhay. Muslimiintu goor walba waxa ay ahaayeen kuwo u hiiliya dhinaca cadaalada ahaana doonaan waligood.
llahayoow Waa Mahaddaa
Gurayska is a CakaaraNews Columnist and can be reached @ Gurayska@live.com
Editorial: Talo Iskuma Kaa Sheegtee Fariin Nabada Dira
Waa Nin Caynkee Ah Wasiirka Arimaha Dibada Garabka Labaad Ee UBO Cabdi Sayid
Puntland Xaq Ayay Uleedahay Inay Xakamayso Hargabka Nabad-Diidka